I-Realme 3 Pro: Ukucaciswa, ixabiso kunye nokwaziswa okusemthethweni | I-Androidsis
Kudala sive iindaba malunga neRealme 3 Pro iiveki. Yifowuni entsha ekumgangatho ophakathi wegama laseTshayina, uphawu lwesibini lwe-OPPO. Kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo kwaqinisekiswa ukuba intetho yakhe iya kuthi yenzeka ngo-Epreli 22, njengoko bekunjalo. Ukongeza, kwezi veki sele sikwazi ukubalula ezinye iinkcukacha zale fowuni, ngenxa yokuvuza okuninzi, njengeprosesa oyisebenzisayo.
Ekugqibeleni, le Realme 3 Pro sele ihanjisiwe ngokusemthethweni. Ke siyayazi yonke into malunga nale smartphone intsha evela kuphawu lwesiTshayina. Ifowuni esungulwe ngaphakathi kwepremiyamu yomvelisi ophakathi kwinqanaba, kwaye ethembisa ukushiya unesimo esihle.
Kwinqanaba loyilo, uphawu lwaseTshayina lulandela iindlela zentengiso. Ke sifumana isikrini esinotshi ngohlobo lwethontsi lamanzi. Ukongeza ekubeni neekhamera ezininzi kwifowuni, njengesiqhelo kuluhlu oluphakathi kwi-Android. Sikuxelela ngakumbi ngale fowuni ingezantsi.
Uhlobo alwaziwa kakuhle kwiimarike zaseYurophu. Kodwa ngale Realme 3 Pro bafuna ukufumana ukungaziwa, kuba inikwa njengokhetho olulungileyo ngaphakathi kuluhlu oluphakathi lwe-premium kwi-Android. Ukucaciswa okuhle, uyilo lwangoku, ukongeza ukubheja kwimibala enefuthe lokuthambeka, nefashoni kwimarike. Zonke izithako ukuze ube yimpumelelo. Oku kukucaciswa kwayo:
IsikriniI-IPS LCD ene-6,3-intshi ene-HD epheleleyo + isisombululo kunye ne-19,5: 9 ratio
Inkqubo: I-Snapdragon 710
Ukugcina ngaphakathi: I-64/128 GB (iyandiswa nge-Micro SD)
Cámara traseraI-Sony IMX519 ye-16 MP kunye nokuvula f / 1.7 + 5 MP ngokuvula f / 2.4
Ibhetri: 4.050 mAh nge-VOOC Flash Charge 3.0
Inkqubo yokusebenzaI-Android Pie enombala we-OS 6.0 njengoluhlu lokwahlulahlula
ConectividadI-SIM ezimbini, iBluetooth 5.0, GPS, LTE / 4G, iWiFi 802.11
abanyeUmfundi weFingerprint, AI
Ubukhulu: 156,8 x 74,2 x 8,3 mm
Ngokubanzi sinokubona izinto ezininzi esizifumana kwezinye ii-smartphones kweli candelo kwi-Android kulo. Uphawu lwaseTshayina luhlala kwifayile ye- Ukusetyenziswa kwezikrini ezinkulu kunee-intshi ezi-6 kule meko. Iscreen esisebenzisa ithuba eliphambili lefowuni, ngomyinge we-90,8% njengoko sele beqinisekisile. Kule notch sifumana ikhamera yangaphambili, eyi-25 MP kule meko.
Ngasemva kwale Realme 3 Pro sinekhamera ephindwe kabini, kunye nesenzi senzwa esikhulu seSony. Ukongeza, sikwafumana inzwa yeminwe kuyo. Ibhetri yenye into ebalulekileyo kwifowuni, enomthamo we-4.050 mAh. Ngokudityaniswa neprosesa kufuneka inikeze ukuzimela okuhle. Ikwazisa itekhnoloji yokutshaja ngokukhawuleza ye-OPPO, VOOC kuyo. Ukuze sikwazi ukutshaja ibhetri kwimizuzu embalwa ngendlela elula.
I-Snapdragon 710: Inkqubo entsha kumgangatho ophakathi
Njengesiqhelo nezinye iimodeli zohlobo lwaseTshayina, ukumiliselwa kwayo kuqala kwezinye iimarike eAsia. Okwangoku, sele isungulwe eIndiya, Apho kunokwenzeka ukuba uthenge le Realme 3 Pro sele okwangoku akukho nto ikhankanyiweyo malunga nokwaziswa kwayo kwezinye iimarike. Kungekudala iza kuqaliswa nakwezinye iimarike zaseAsia. Kodwa asazi ukuba iya kuphehlelelwa naseYurophu, nangona kungenzeka ukuba yenzeke noko iphantsi.
Sifumana imibala emithathu yale Realme 3 Pro, onokuyibona efotweni. Ezi zi-Lightning Purple (purple), i-Nitro Blue (eluhlaza okwesibhakabhaka) kunye neCarbon Grey (ngwevu) Ke unokukhetha phakathi kwezi ndlela xa uthenga enye. Ukongeza, kukho iinguqulelo ezimbini ngokwe-RAM kunye nokugcinwa, amaxabiso asemthethweni:
Inguqulelo ene-4/64 GB isungulwe ngexabiso le-13.999 rupees (malunga ne-179 euro ukuyitshintsha)
Inguqulelo ene-6/128 GB iza nexabiso lama-16.999 ama-Indian rupies (malunga nama-euro angama-218 ngokutshintshiselana)
Siza kuzimamela iindaba ezinokubakho malunga nokuqaliswa kwamazwe aphesheya koluhlu oluphakathi lophawu lwaseTshayina. Ucinga ntoni ngale smartphone intsha evela kuhlobo?
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » I-Realme 3 Pro: Uluhlu oluphakathi kwinqanaba elitsha